Ururka Cilmiga Naamiska Adduunka
Waxaan ku fadhiisan doonaa qaab aad u fiican, oo micnaheedu yahay maahmaahda 'albucius qeexida'. Badda solet patrioque at, quas meliore ocurreret eam on.
Adeeg 1Adeeg 2Adeeg 3Adeeg 4
Soo ogow faa'iidooyinka ururkeena xirfadeed!
Ku saabsan Ururka Cilmiga Naamiska Adduunka
Xubin ka noqo ururka ugu weyn by cidiyaha iyo gacmaha qurxinta.
Kusoo dhawow World Nail Association, ururka xirfadlayaasha naqshadeeyayaasha ciddiyaha.
World Nail Association, oo la asaasay 2005, waxay suuqa ku guuleysatay hormar ballaaran.
WNA waa koox dan guud ah oo dan u leh dhammaan waxyaalaha la isku qurxiyo ee gacmaha iyo ciddiyaha.
Ururka 'ciddiyaha adduunka' waa ururka xiisaha u qaba naqshadeeyayaasha ciddiyaha, kuwaas oo u heellan ilaalinta, kobcinta iyo aqoonsiga sumcadda xirfadeed.
Für waxbarasho dheeraad ah
Iyada oo lala kaashanayo Machadka Nail ee Yurub, naqshadeeyayaasha ciddiyaha ayaa loo diyaariyey jidkooda si ay u helaan faa iidooyinkooda cusub iyo mustaqbal ku-jihaysan waxqabadka iyada oo qayb ka ah koorsooyin tababar sare oo tayo sare leh oo ka yimid tababarayaal la aqoonsan yahay. Waxaa la bartilmaameedsaday tababar dheeri ah iyo kor u qaadista guud ahaan shaqooyinka guud si loo hubiyo in tayada sare ee macaamiisha laga helo saqafka ciddiyaha.
Iyada oo lala kaashanayo Ururka Naafada Yurub iyo Ururka Naafada Caalamiga ah, Ururka Naafada Adduunka wuxuu si gaar ah fiiro gaar ah u siiyaa abaabulka tartamada caalamiga ah iyo kan qaranka, gaar ahaan munaasabada ugu muhiimsan ee dhammaan warshadaha ciddiyaha, World NAIL CHAMPIONSHIP, kuwaas oo waxyaabo kale ka yihiin tartan cadaalad ah oo saaxiibtinimo ah. tartamaya iyo ixtiraamka waxqabadka naqshadeeye cidiyaha oo dhan wuxuu u arkaa hawl.
Tani waxaa sidoo kale ka mid ah tababarka iyo kor u qaadista garsoorayaasha loo tababaray si waafaqsan shuruudaha qiimeynta caalamiga ah ee iyaguna u shaqeeya danaha naqshadeeyayaasha cidiyaha, iyo sidoo kale samaynta tilmaamaha heerar badan oo tartan si ay u awoodaan inay si cad u go'aamiyaan kuwa guuleysta.
Kahortagga naqshadeeyayaasha ciddiyaha tartan aan caddaalad ahayn, tababarro aan xirfad lahayn, shirkadaha iibka liidata iyo alaabada aan ruqsad la siinin waa aag kale oo muhiim u ah mas'uuliyadda.
Amniga nabadgelyada saqafka ciddiyaha iyo macaamiishooda waa in aan loo dul qaadan xaalad kasta, gaar ahaan waqtigeenna tirada sii kordheysa ee qodista suuqa. Hirgalinta Xeerarka qurxinta Yurub ee la kaashanayo masuuliyiinta masuulka ka ah ayaa si gaar ah muhiim u ah.
Ma rabtaa xubin
Xubin ka noqo ururka ugu weyn adduunka ee naqshadeeyayaasha cidiyaha!
Talo bilaash ah
Markaad ganacsi bilaabayso
Suuqgeynta iyo arrimaha maamulka.
carwooyinka ganacsiga la xushay!
BILAASH: Shirka ganacsiga ee xarumaha tababarka duwan.
Shahaadada WNA & warqad dhejiska albaabku waa lacag la'aan
Lacagta xubinnimada kaliya € 9,50 bishii!
Diiwaangelin guul leh kadib Marka la isdiiwaangaliyo, waxaan kuu soo diri doonaa xogta helitaanka xariirka kala-sooca.
Foomka Isdiiwaangelinta [Jarmalka]
Das sind Faa'iidooyinkaaga
Faa'iidooyinka aad ka leedahay xubin ka mid ah ururka ugu weyn ee ciddiyaha iyo qurxinta gacmaha.
Kala soocidda saqafyada ciddiyaha
Baasaboorka cidlada Yurub
Qalin-jabinta marinka ciddiyaha adduunka oo dhan
Xubnaha Ururka Ciddiyaha Ciddiyaha Adduunka ayaa xaq u leh
si aad uga qeyb gasho Tartanka Aduunka bilaa qarash diiwaan gelin.
Garsoorayaasha waxaa loo tababaray heerka ugu sarreeya, marka loo eego shuruudaha caalamiga ah iyo saamiga dahabiga ah
Cadeynta shirkadaha iyo xarumaha wax laga sheego, ku dhaqanka, dabinka, khiyaanada iyo ku xadgudubka UWG
Wakiilka danaha sare iyo guddiga la talinta
Seminaaro & aqoon isweydaarsiyo
Talooyin ku saabsan dhammaan su'aalaha ku jira macnaha siminaarada iyo aqoon isweydaarsiga
Xiriir aqoon leh
Khabiir iyo shaqaale aqoon leh oo daryeeli doona waxyaalaha aad ka welwelsan tahay
Tartamayaasha ayaa loo tababbaray heerka ugu sarreeya, marka loo eego shuruudaha caalamiga ah iyo saamiga dahabiga ah
Tartamayaasha waxaa si joogto ah loogu wargaliyaa tartamada qaran iyo kuwa caalamiga ah ee adduunka oo dhan
Waraaqaha joogtada ah iyo macluumaadka ku saabsan liisaska liiska TOP 25 ee adduunka
Kaqeybgalayaasha aqoon u leh ayaa lagu kafaala qaaday tartamo kala duwan oo Nailpro Tartanka Koobka sida Sacramento, ISSE Long Beach, IBS Las Vegas iyo Premiere Orlando
Soo bandhigid dhiirrigelin ah
Kor u qaadista santuuqa iyadoo loo qoondeeyay oo la siinayo tayada WNA
Su'aalahaaga oo dhan ayaad u diyaarsan tahay koox aqoon sare leh
Ma rabtaa Guul
Iyadoo WNA ay u tahay taageero naqshadeeye ciddiyaha faa’iido leh.
Saxiix oo isticmaal faa'iidooyinka!
Soo dejiso diiwaangelinta PDF
Madaxweyne Ina Maria Schmid
Maamulaha guud KoR Dipl.-BW Ina Maria Schmid MBA
Waxa loo heli karaa talobixin shaqsiyeed.
Su'aalahaaga waxaa si farxad leh looga jawaabi doonaa qoraal ama taleefan.
WNA - Ururka Ciddiyaha Dunida
Telefoon: +43 (0) 42 54/25 7 33
Hadaad rabto inaad waxbadan ogaato.
Wehelkaa oo bixiya hagista dhammaan su'aalaha.
Khibrad iyo karti.
Sababta oo ah maahan inaad kahadasho waxqabadka oo kaliya, waa inaad ku noolaataa!
Way fiicantahay in la ogaado halka waxkasta ay kusaabsan yihiin guushaada.
Fursado badan - waqti la'aan.
Shabakadda badbaadada ee saqafkaaga.
Sababo badan oo wanaagsan oo ku saabsan xubinnimada ENA. Way fiicantahay in la ogaado waxa soo galaya.
La xiriir annaga!
ENA - Ururka Badda Yurub
Telefoon: +43 (0) 4254 25 7 33
2021 All rights reserved - Waxaa sameeyay Ururka Cilmiga Aduunka